September 26, 2019 - Myitter
နေရပ် စက်စဲမြို့သို့ ပြန်မည့် အဆုတ်ကင်ဆာ လူနာအဖိုး၏ အပြင်းပြဆုံး နောက်ဆုံး ဆန္ဒတစ်ခု ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသည်။
September 26, 2019 Myitter 0
ဖူးမြှော်ကန်တော့ လိုက်ရပါသည် မြတ်ရွှေတိဂုံ။ ဒီမနက် စောစော နေရပ် စက်စဲမြို့သို့ ပြန်မည့် အဆုတ်ကင်ဆာ လူနာအဖိုး၏ အပြင်းပြဆုံး ဆန္ဒတစ်ခုအား ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသည်။ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ မြတ်ရွှေတိဂုံကို စိတ်ကျေနပ်တဲ့ အထိ ဖူးမြှော်နေရှာတဲ့ အဖိုးကိုကြည့်ပြီး ကျနော်တို့ ရင်ထဲစို့တက်နေမိတယ်။ အဖိုး ကျေနပ်ပါတော့။ တော်ဝင် […]
လူတစ်ဦး Mandalay ဖိနပ်ဆိုင် Great Wall Center နဲ့ ဆက်နေတဲ့ 3ထပ်အဆောက်အုံ အပေါ်ဆုံးကနေ ပြုတ်ကျလာ
26-9-2019 MDY ဆိုင်ကအပြန် 78လမ်း 32 ×33 ကြားမှာ ခုနလေးတင် လူတစ်ဦး Mandalay ဖိနပ်ဆိုင် Great Wall Center နဲ့ ဆက်နေတဲ့ 3ထပ်အဆောက်အုံ အပေါ်ဆုံးကနေ ပြုတ်ကျလာတာလားခုန်ချတာလားမသိဘူး။ အသက်တော့ရှုနေသေးတယ်ကိုယ်တွေ့တုန်းကသွေးထွက်တာမမြင်သေးဘူးဘယ်သူမှလည်းမကိုင်ရဲကြဘူးရဲတွေရောက်အလာကိုစောင့်နေကြတာခဏနေတော့ရဲတွေရောက်လာတယ်လူတွေအုံလာတာနဲ့လမ်းပိတ်မှာစိုးလို့ကြည့်တဲ့လူတွေပြန်ခိုင်းတယ်…. ကိုယ်ကတော့စပ်စုလို့ကောင်းတုံး ကြည့်နေရင်းသွေးတွေစီးလာတာတွေ့ရတယ် ရဲတွေနာရေးကူညီမှုအသင်းကား ဖုန်းဆက်ခေါ်တယ် ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတော့အတိကျမသိဘူး…. […]
ရန်ကုန်မြို့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ဓားထောက်ပြီရွှေ/ငွေ သိန်း(၁၅၀)ဖိုး လုယူခဲ့သောလက်ပံကုန်းရွာသားဖမ်းမိပြီ
ရန်ကုန်မြို့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ဓားထောက်ပြီရွှေ/ငွေ သိန်း(၁၅၀)ဖိုး လုယူခဲ့သော မအူပင်မြို့နယ်မလတ်တိုကျေးရွာအုပ်စု လက်ပံကုန်းရွာသားဖမ်းမိပြီ ရန်ကုန်မြို့ လသာမြို့နယ် အိမ်အမှတ်(၁၆)လာသာအောက်လမ်းနေ ဦးမင်းမင်း အင်တာနက်ဆိုင်အတွင်း (22/9/2019)နေလည် 12:30pm အချိန်ခန့်ကမအူပင်မြို့နယ် မလတ်တိုကျေးရွာအုပ်စု လက်ပံကုန်းရွာနေ ကိုဇင်းမင်းထက်(ခ)ကြက်ဖ(ခ)ကျောင်းသား မှာ ဓားထောက်ပြီ ရွှေထည်ပစ္စည်း(၉)မျိုး နှင့် ငွေသားကာလတန်ဖိုး သိန်း(၁၅၀)ဖိုးလုယူ ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ […]
မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့နယ် အ.ထ.က (ခွဲ) ကျားဘို၊ ​ကျောင်းဆောက်​တာ ၃ နှစ်​စွန်းစွန်း​လေးပဲ ရှိသေးတယ်​… ၂၂.၉.၂၀၁၉ ရက်​​နေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၄၅မိနစ်​မှာ စာသင်​​နေတဲ့ ​ကျောင်းသား​တွေအ​ပေါ် မျက်​နှာကျက် နဲ့ သံတန်း​တွေ ပြိုကျပါတယ်​ က​လေး​တွေက​တော့ ဒဏ်​ရာ နည်း​ပေမယ့်​ […]
လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့သမီးမို့ကတ်ပြား ပြစရာ မလိုဘူးဆိုပြီး လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကို ကြိမ်းမောင်းတာဟာ ဖြစ်သင့်ပါသလား ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေ။ ဘယ်သူ့သမီးမှန်းတော့ မသိရသေးဘူးနော်။မှတ်ချက်။တိုင်းအစိုးရုံးမှာ ဒီနေ့ 26.9.2019 မှာ လုံခြုံရေး တင်းကြပ်နေလို့ လာသမျှသူတိုင်း ကတ်ပြားထုတ်ပြီးမှ ဝင်ခွင့်ရတာပါ။ ဘယ်သူ့သမီးမှန်းတော့ မသိရသေးဘူးနော် Source – #မုံရွာ#ခင်နန်းထိုက် Unicode လှတျတျောကိုယျစားလှယျရဲ့သမီးမို့ကတျပွား ပွစရာ […]
ဥရောပ၏ အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် ရုရှားတွင် ဖွင့်လှစ်အပူဇော်ခံ
ဥရောပ၏ အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် ရုရှားတွင် ဖွင့်လှစ်အပူဇော်ခံ ဥရောပတိုက်၏ အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ဖြစ်သည့် ဥာဏ်တော် ၄၁ပေ၊ တန်ချိန် ၃၀ရှိ ရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူကို ရုရှားနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစု နေထိုင်ရာ ကားလ်မာကီယာ အရပ်တွင် စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့၌ ဖွင့်လှစ် အပူဇော်ခံခဲ့ကြောင်း […]
မျက်စိတစ်ဖက်လှစ်ဟနေတဲ့ မိန်းကလေးကို မျက်လုံးအစားကုပေးခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဝေလု
မျက်စိတစ်ဖက်လှစ်ဟနေတဲ့ မိန်းကလေးကို မျက်လုံးအစားကုပေးခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဝေလု ဝေလုဟာ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပရဟိတစိတ်ထက်သန်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ ပရဟိတအလုပ်ကလေးဟာဆိုရင် မျက်စိဝေဒနာရှင်တစ်ချို့ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိတစ်ဖက်လှစ်ဟနေတဲ့ သူတွေကိုကျောက်မျက်လုံးအစားထိုးထည့်ပေးပြီး ဆေးရကုသစရိတ်တွေ အကုန်လှူဒါန်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခုဆိုရင်လည်း ဧရာဝတီတိုင်းမအူပင်မြို့နယ်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အလှူလေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါပြီ။ ” သူ့နာမည်က ခိုင်ဝါလင်း တဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း မအူပင်မြို့ကပေါ့ […]
ရဲရွာ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်ညွှန်ချုပ်ကို အဂတိဥပဒေနဲ့ ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီ……
အထက်ရဲရွာ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အား အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၅၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ဘုရားကုန်း မြို့မရဲစခန်း၏ မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၅၆ ဖြင့် […]
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် စံပြ(၄)လမ်းတံတားအတက်အဆင်းနားမှာ အခုပုံပါအဖွားက တစ်ညလုံးအဲ့လိုလေးနေ နေတာပါ
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် စံပြ(၄)လမ်းတံတားအတက်အဆင်းနားမှာ အခုပုံပါအဖွားက တစ်ညလုံးအဲ့လိုလေးနေ နေတာပါ မိုးရွာလဲအဲ့တိုင်း အေးနေလဲအဲ့တိုင်းနေနေတာပါ နေ့ရောညရော ကိုယ်လဲည(၁၁)နာရီလောက်ကြီးဖြတ်သွားတုန်းမြင်တာနဲ့သွားပြီးမေးကြည့်တော့… အဖွားကမျက်စိလဲမမြင်နားလဲမကြားဘူး နေ့ဘက်ဆိုရင်ရှေ့မှာချထားတဲ့စတီးဗန်းလေးထဲ အသီးအရွက်လေးတွေထည့်ပြီးရောင်းပါတယ် တောင်းမစားပါဘူး… အရင်ကနေ့ဘက်တွေမှာအဖွားကိုဈေးရောင်းနေတာမြင်ရင်တတ်နိုင်သလောက်လှုခဲ့ပါတယ် အခုညဘက်ကြီးအခုလိုကြီးမြင်တော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်… မိုးရွာရင် သူဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူး သူ့မှာမြေးတွေရှိတယ်လို့ဘေးနားကသူတွေပြောပေမယ့် ဘယ်သူမှလာကြည့်တာမမြင်မိဘူး ပစ်ထားကြတယ်ထင်ပါတယ်…. ကိုယ်လဲစကားသွားပြောတော့ နားလဲမကြားမျက်လုံးလဲမမြင်ဘူး ဘာမှပြောလို့မရလို့ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်လေးလှုပြီးပြန်လာခဲ့တယ် အဖွားက […]
အမေစုအတွက် ရင်ပူစွာနဲ့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ အေသင်
အမေစုအတွက် ရင်ပူစွာနဲ့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ အေသင် ပရိသတ်ကြီးရေ ၊တနေ့ကဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတက်ချိန်က အမေစုမျက်နှာမှာလေဆာစပေါ့တစ်ခုလာထိုးတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်……သူမကလည်းချက်ချင်းသိတယ်ဒါပေယ့်ဘေးလူတွေဂရုပြုမိတဲ့အနေအထားတော့မတွေ့ရပါဘူး……. ဒီစပေါ့တွေအသုံးပြုတဲ့နေရာတွေကိုသိထားသူတွေအတွက်စိုးရိမ်စိတ်ဝင်မိသွားကြမှာမဆန်းပါဘူး၊အမေစုရဲ့ သားသမီးတွေကတော့ အဆိုပါကိစ္စအပေါ်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ ။ အမေစုကို ချစ်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေတစ်ယောက် အမေစုအတွက် စိတ်ပူကြောင်း လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရေးသားခဲ့တာပါ ။ အေသင်က “အမေရယ် ဂရုစိုက်ပါနော်ပါတီကိုသိပ်သဘောမတွေ့ပေမယ်အမေစုကိုတော့ ချစ်တယ်။အမေစု ဘေးကင်းပါစေ၊ ရန်ရှင်းပါစေ၊ နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေ။”ဆိုပြီးဆုတောင်းပေးထားပါတယ်။ […]